Global Voices teny Malagasy » Shina: Avoahy Ilham Tohti — Tohano ny Fampihavanana Ara-Poko · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Janoary 2014 16:31 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Naomy
Sokajy: Shina, Fanentanana, Fisamborana sy faneriterena, Mediam-bahoaka, Solovava
Nosamborin'ny polisy tamin'ny 15 janoary teo i Ilham Tohti, mpanorina ny Uyghur Online  sady mpisolovava tony fihetsika ho amin'ny politikan'ny fizakantenan'ny foko ao Shina. Mametraka azy ho mpisintaka ny mpitondratenin'ny Antoko Komonista Shinoa (CCP). Maro amin'ny avara-pianarana fanta-bahoaka no mandresy lahatra fa mety hiafara amin'ny toe-draharaha tsy azo avotana intsony momba ny fampihavanana ara-poko ao Shina ny fitsarana azy.
Saingy tsy mitovy amin'izany kosa ny eritreritry ny Shinoa mpitondra amin'izao fotoana izao. Ny milina mpampiely ny hevitry ny Antoko Komonista Shinoa isoloan'ny Global Times vava dia niteny tamin'ny matoandahatsoratry ny 18 janoary  fa manana fifandraisana akaiky amin'ny Kongresy Uyghur Manerana Izao Tontolo Izao , vondrona ampitan-dranomasina izay tondroin'ny CCP ho mpisintaka faratampony, i Ilham Tohti. Ampangain'ny tatitra ihany koa i Ilham Tohti ho mpandrisika ny mpiara-mianatra aminy sy mpampiely tsaho sy hevitra mampisintaka amin'ny alalan'ny Uyghur Online, tranonkala iray naorina tamin'ny 2006 hiresaka momba ny fifandirana ara-poko ao Shina avy amin'ny fomba fijery Uyghur. Tsy azo nidirana intsony moa ny tranonkala hatramin'ny nisamborana an'i Ilham.
Araka ny voasongadina ao amin'ny fanangonan-tsonia an-tserasera  nosoniavin'ny avara-pianarana Shinoa mihoatra ny 1000 ho famoahana an'i Ilham Tohti, dia nanana anjara toerana manana ny lanjany tamin'ny fampihavanana ara-poko ao Shina ity profesora Uyghur mampianatra ao amin'ny Oniversite Minzhu ao Beijing ity:
Araka ny filazan'ny vadin'i Ilham, tao amin'ny kaonty iray noraiketin'ny mpanoratra Tibetana Woeser , dia nosamborina manoloana ireo zanany lahy i Ilham ary noraofina ireo solosainany:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/01/31/57201/
 matoandahatsoratry ny 18 janoary: http://news.sina.com.cn/c/2014-01-18/023529279991.shtml
 Kongresy Uyghur Manerana Izao Tontolo Izao: http://www.uyghurcongress.org/en/
 fanangonan-tsonia an-tserasera: https://docs.google.com/forms/d/15EVdct52bl32-bvTlVAzriIgToZw2TMBxaImWVb171Y/viewform
 noraiketin'ny mpanoratra Tibetana Woeser: http://woeser.middle-way.net/2014/01/the-process-of-ilhams-being-taken-from.html